China girazi Bhodhoro Bheri Kuzadza Machine fekitari uye bhizimisi | Higee
Yedu Bheri yekuzadza muchina mutsara unobatanidza kushambidza bhodhoro, kuzadza uye capping muchina mune imwe monoblock muchina. Maitiro acho anoitwa zvizere otomatiki. Kuzadza muPET bhodhoro kana bhodhoro regirazi kana kunwa bhodhoro zvese zvinogona kugadzirwa.
Kwikwidza Girazi Bhodhoro Beer Kuzadza Muchina Monoblock Kugadzira Line
1.Beer Bhodhoro Screw feeder
2.Bheri bhodhoro Kushambidza Kuzadza uye Capping Machine
Iyi Beer yekuzadza michina inotora bhodhoro mutsipa wakabata hutachiona tekinoroji kuti uone zvizere otomatiki kusuka, kuzadza uye capping. Iyo yakagadzirirwa CO2 kunyatso kumanikidza kumanikidza kudzora, kuitira kuti huwandu hwemvura hunogara hwakagadzikana. Iko kushandiswa kwemaaramu ekushandisa kwejamu bhodhoro, kushomeka kwebhodhoro, kukuvara kwebhodhoro, kushomeka kwekapu, pamusoro pekutakura nezvimwe munzvimbo dzinoverengeka kuverengera mhando yekugadzirwa kwayo. Muchina unowana zvakanakira kutendeseka kwakakwirira, kushanda kwakanyanya, giredhi rakakwira rekushandisa uye nyore kushanda, nezvimwe.
● nehombodo yemutsipa yekucheka kutapura chimiro, iyo yekuendesa bhodhoro yakatsiga; inonyatsoita uye inokasira kushandisa mabhodhoro akasiyana ekuzadza mumushini mumwe chete nekugadzirisa kukwirira kweanotakura uye akati wandei ekuchinjana zvikamu.
● neIsobaric yekuzadza dzidziso, yekumhanyisa mhanyisa inokurumidza uye kunyatso kukwirira; Chikamu chekuzadza chinogadziriswa.
● Capping Machine inotora tekinoroji yeFrance, iyo capping ndeyemagineti torque; iyo cap inobata inotora kaviri inobata kuti ive nechokwadi cheicho.Caps simba rinogadziriswa, kugara torque capping hakuzokuvadze ngowani uye chivharo chakanaka chakanamwa uye chakavimbika.
Pashure: PET Bhodhoro Juice Kupisa Kuzadza Muchina
Zvadaro: Girazi Bhodhoro Doro rekuzadza muchina mutsara